Ndị na-eweta ngwa ngwa na ntinye ngwaahịa - China Infusion & Transfusion Category Manufacturers
A na-eji mmịnye ọbara amịnye ọbara na-ebugharị ọbara na-atụle ma na-achịkwa usoro maka ọrịa. Emere ya site na ulo ntancha na / na-enweghi ikuku enyere na nzacha iji gbochie uzo nke ihe obula n'ime onye oria.
1. Soft tubing, na ezi ekwedo, elu nghọta, mgbochi asọfe.
2. Uzo uzo uzo na nzacha
3. Akpali mmiri site EO gas
4. Akporo iji: maka itinye ọbara ma ọ bụ ihe ndị mejupụtara ọbara n'ụlọ ọgwụ.
5. modelsdị pụrụ iche na arịrịọ
6. Latex anaghị akwụ ụgwọ / DEHP anaghị akwụ ụgwọ
Usoro ọgwụgwọ infusion dị mma ma nwee ahụ iru ala
Kpọmkwem nyo ìhè na-eguzogide ọgwụ infusion set
A na-ejikarị ngwaahịa a eme ihe na ọgwụ ọgwụ nke na-adaba na mbibi foto na ọgwụ mgbochi ọgwụ. Okwesiri ka odi nma maka ogwu ogwu nke ogwu paclitaxel, ogwu cisplatin, ogwu aminophylline na ogwu nitroprusside.
Light eguzogide infusion set
Infusion setịpụrụ maka otu ojiji (DEHP n'efu)
"DEHP free ihe"
Ihe ntinye nke DEHP na adighi nma bu nke ndi mmadu sara mbara karie ma nwee ike dochie anya ihe ndi ozo. Bornmụ amụrụ ọhụrụ, ụmụaka, ndị nọ n'afọ iri na ụma, ụmụ nwanyị dị ime, ụmụ nwanyị na-enye nwa ara, ndị agadi na ndị ọrịa na ndị ọrịa na-achọ ịmịnye ọgwụ ogologo oge nwere ike iji ya na-enweghị nchebe.
Kpọmkwem nyo infusion set
Enwere ike igbochi nje na-adịghị ọcha na infusion.
Ihe omumu omumu omumu egosiputala na otutu akuku nke ogwugwo nke ihe omuma bu nke ihe ndi ozo. N'ime usoro ọgwụgwọ, a na-emepụta ọtụtụ ihe ndị pere mpe karịa 15 μm, nke ndị anaghị ahụ anya ma ndị mmadụ na-eleghara ya anya.
TPE kpọmkwem nyo infusion set
Ihe eji arụ ọrụ ahụ na - eme ka mmiri kwụsị ịmịkọrọ mmiri na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ. Liquid nwere ike kwụsị stably ọbụna ma ọ bụrụ na ahụ ọnọdụ na-gbanwere gabiga ókè ma ọ bụ infusion na-ebili na mberede. Ọrụ ahụ kwekọrọ, ọbụnakwa dị mfe karịa nke usoro infusion nkịtị. Ọkpụkpụ akpukpo ahụ na - akwụsị akwụsị ịmị mmiri dị ka asọmpi ma nwee atụmanya ahịa ka mma.
Auto stop fluid kpọmkwem filter infusion set (DEHP n'efu)
Auto nkwụsị mmiri kpọmkwem nyo infusion set